यसरी प्रीय बने रबि लामिछाने हेर्नू होस समर्थनको जनसागर!
एउटा घटना भयो। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। अदालतमा उपस्थित गराई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्‍यो। अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो सामान्य प्रक्रिया हो। सबै घटनामा हुने यस्तै हो। तर अहिले परिस्थिति फरक छ। न्युज २४ टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘सीधा कुरा जनतासँग’का प्रस्तोता रवि लामिछानेको समर्थनमा भिड उर्लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत बाहिर उनीहरुले शुक्रबार नाराबाजी गरे। शुक्रबार र शनिबार भिड उत्तेजित हुँदा झडपसमेत भयो। केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भए।
४१६ वटा एपिसोडमै रविले के त्यस्तो जादू गरे, जुन नेपालका कुनै पनि टेलिभिजन प्रस्तोताले गर्न सकेका थिएनन्?इर्ष्या र डाहा गर्न त पाइयो तर सँगै एक पटक सोच्न पनि पर्‍यो, पत्रकारिताको अभ्यासमा अडियन्स (दर्शक/पाठक) र सञ्चारकर्मीबीच रहेको एउटा ठूलो खाडललाई उनले कम गरेका त हुन् नि। हाम्रो बोली उनले बोलिदिन्छ भन्ने आशा र विश्वास सामान्य मानिसका मनमा उनले पारिदिएका त हो नि। गलत काम गर्नेहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने बनााइदिने काम त उनले गरेका हुन् नि।
‘मैले सानो केही गलत काम गरे अहिले जिन्दावाद नारा लगाउनेहरुले नै मलाई भोलि देश छाड भनेर कुर्लने छन् भन्ने मलाई राम्रै थाहा छ’, उनले भनेको सम्झन्छु।अनित्यताको यति ज्ञान भएको रविले असुली गरेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेका होलान्? खैर शालिकरामले करोडौँ असुल्छ भनेर मृत्युअघि बनाएको भिडियोमा बोलेको कुरा अहिलेलाई आरोपमात्रै हो। प्रहरीले यो विषयमा छानबिन गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। यति कुरा आएपछि राज्यलाई चासो लागे छानबिन गर्न सक्छ। छानबिनबाट अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अहिलेलाई यो आरोपमात्रै हो। शालिकरामलाई उनले मर्न बाध्य बनाएको हो कि हैन यो विषयमा पनि प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतले फैसला गर्ने नै छ।
कसरी हिरो बने रवि?रवि एउटा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन चाहन्थे। आमिर खानको टिभी कार्यक्रम ‘सत्यमेव जयते’ हेरिसकेपछि त्यस्तै कार्यक्रम नेपालमा पनि चलाउन फ्रेन्चाइजी लिन उनले इन्डिया गएर खानलाई भेट्न खोजे। तर रविलाई चिन्ने कसले? आमिर खानले भेट्नै मानेनन्। उनमा इख पलायो। केही यस्तो काम गर्नुपर्‍यो, जसका कारण आफ्नो नाम रहोस्। त्यसपछि उनले ६२ घण्टा १२ मिनेटसम्म कार्यक्रम चलाएर विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म टक शो होस्ट गरेको विश्व कीर्तिमान बनाए। यो सन् २०१३ को कुरा थियो।
यो प्रकरणले सिक्नु पर्ने केही विषय मलाई यस्तो लागेको छ-१) पत्रकारितालाई पाठ:कुनै सञ्चारकर्मीको पक्षमा यसरी सडकमा जनता उत्रिएको मलाई थाहा छैन। अरु सञ्चारकर्मीले सोच्नुपर्छ- हाम्रो पत्रकारितामा कहाँनिर के ‘मिस’ भइरहेको छ। के हामीले अडियन्स र सञ्चारकर्मीबीच रहेको खाल्डोलाई पुर्न नसकेका हौँ। त्यो खाल्डो अझ फराकिलो र गहिरो बनाउँदै लगेका हौँ। के सर्वसाधारणले अरु पत्रकारहरुलाई आफ्नो आवाज बोल्न नसक्ने ठानेका हुन्? आवाजविहीनहरुको आवाज बन्न अरु पत्रकार नसकेका हुन्? रविको शैलि ठीक हैन भने ठीक शैलीमा उनको भन्दा प्रभावकारी सञ्चारकर्म गर्न नसकेका हुन्? अरु पत्रकारलाई किन गाली गर्छन् ? उनलाई किन ‘भगवान’ सरह मान्छन्?
३) आफ्नो काम गरे हिरो भइँदो रहेछनेपालमा हिरो हुन अरु केही नगरे हुने रहेछ। आफ्नो काम इमान्दारीका साथ गरे हुने रहेछ। रवि लामिछाने एक टेलिभिजन प्रस्तोता हुन्। उनले पीडितहरुको आवाज आफ्नो कार्यक्रममार्फत् टेलिभिजनमा सुनाए। यो उनको काम थियो। सेलिब्रिटी भएका प्रहरीहरु पनि हेर्नुस्- उनीहरुले गरेको काम भनेको अपराधीलाई पक्रनु थियो, जो उनीहरुको कामै हो। विद्युत प्राधिकरणको एमडीको हैसियतले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गरेर लोडसेडिङ हटाउँदा कुलमान घिसिङ हिरो भए। अरुले आफ्नो काम नगरेको भएरै यत्रो वर्ष लोडसेडिङ सहनुपरेको रहेछ।तपाईँलाई के लागेको छ ? आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ।माइ संसार बाट